» “सपना रोका मगर भन्छिन, पल शाह गरिब दु:खिका भगवान हुन ! खाना खुवाउदा, हात’पात मलाई पटक पटक मा’र्न खोजियो(भिडियो) “सपना रोका मगर भन्छिन, पल शाह गरिब दु:खिका भगवान हुन ! खाना खुवाउदा, हात’पात मलाई पटक पटक मा’र्न खोजियो(भिडियो) – हाम्रो खबर
“सपना रोका मगर भन्छिन, पल शाह गरिब दु:खिका भगवान हुन ! खाना खुवाउदा, हात’पात मलाई पटक पटक मा’र्न खोजियो(भिडियो)
“राजधानी शहरमा अवस्थित पशुपति आ´र्यघाटमा बेबारिसे ला´सहरुको अन्तिम संस्कार गर्दै आएकी सपना रोका मगरलाई बीबीसीद्वारा यस वर्षको सय प्रेरणादायी महिलाका रुपमा शूचिकृत गरिएको छ । हाल १८ वर्ष मात्र पुगेकी सपनाले यस्तो काम गरिरहेकी छिन् जुन एउटा किशोर वा किशोरीको लागि अनौठो मात्र हैन सुन्दै अपत्यारिलो पनि छ ।”
“आफन्त बिनाको श´व फेला पार्न साथै त्यसको अन्तिम संस्कार गर्न उनी सक्रियतापूर्ण संलग्न रहन्छिन । उनी भन्छिन् “यस संसारमा हजारौँ मानिस घरबिहिन छन, उनीहरुको घर भने पनि महल भनेपनि यस सडक नै हो । तसर्थ उनीहरुले राम्रो सँग अन्तिम संकार पाउनु पर्छ । यसकारण म यो काम सामाजिक सेवाका लागि भन्दा पनि आफ्नै मन शान्तिको लागि गर्छु । ”
“उनले अहिलेसम्म ३५ भन्दा धेरै लाशहरुलाई ब्यवस्थापन गरिसकेकी छिन् । उनी यस संगठन संगै आवद्घ छिन् उनको यस संगठनले सडकबाट परित्यक्त श´वहरु प्राप्त गर्दछ र ती ला´शहरुलाई पोस्टमार्टम जाँचको लागि अस्पताल लाने ब्यवस्था गर्दछ । यदि ३५ दिन सम्म पनि ला´सको खोजी गर्न कोही पनि उपस्थित भएन भने संगठनले यसलाई सम्सान घाटमा ल्याई अ´न्तेस्टि गर्ने काम गर्दछ ।”
“आफू विरुद्ध अश्लील अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सपना रोका मगरले दिएको जाहेरीका आधारमा विनयजंग बस्नेत पक्राउ परेका थिए। सपनाले फागुन २ गते विनय जङ्ग विरुद्ध महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ जाहेरी दिएकी थिइन्।”
“बिनयको रिहाइको माग गर्ने जमातहरु बढेको थियो । निश्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिदै आफुहरुले कुरा राख्दै गर्दा प्रहरी त्यो पनि पुरुषले आफू महिलामाथि हस्तक्षेप गरेको र दमन आफुहरुले नसहने र प्रहरिको यस्तो चर्किकलालाई आफुहरुले सहन नसक्ने पनि बताएका थियो ।त्यती मात्रै हैन रिहाइको माग गर्नेले उग्र रुपनै लियो ,ज्वालामाथि प्रहरिले दमन समेत गर्यो,सपना उपर जवाफदेही हुनुपर्ने समेत जोड दिइएको थियो ।”
“नभन्दै केही दिन अघि सामान्य धरौटिमा बिनयजङ छुटेसगै अहिले फेरि आफ्नो कर्मथलो घा`टमा ला`स पोल्ननै सक्रिय देखिए बिनयजङ । छोरी सपनाले बिर्सिएपनि म बिर्सिन्न भन्दै सपनालाई सम्झेर खुब रोए बिनयजङ त्यति मात्रै हैन आफ्नालाइ पाखा र परकालाई काखा गर्दा मेरो यस्तो हालत भएको समेत जिकिर गरेका थिए ।”
“लकडाउन अगावै सपना फेरि आफ्नो पहिलेकै अवस्थामा फर्किएकि थिइन । बिहान कलेज जान्छिन् र दिउँसो भने ला`शलाई दागबत्ती दिन्छिन् ।पछिल्लो पाचदिनमा आफुले १० जनालाई दागबत्ती दिसकेको समेत बताएकि थिइन् ।”
“अहिले तिनै सपना दिन दुखि पिडित र भोकालाई खाना खुवाउन भन्दै सडकसम्म आएकि छिन् । उनले हाम्रो टिम नेपालको स-परिवार सहित नायक पल शाहको खुलेरै प्रशंसा गरेकि छिन् ।आफ्नो कामको आलोचना धेरै ले गर्ने गरेको र जस्ले आफुलाई माथि पुर्यायो उसैले तल फ्यालिदियो भन्दै उनी भावुक पनि भइन । हेर्नुहोस तलको भिडियो :-”